Sida loo abuuro Home DVDs la Best Movie Samaynta Software
> Resource > Video > Movie Making Software: Sida loo sameeyo a Taabashada Home Movie
Life waa duqsiyo badan oo qurux badan, laakiin mar. Si uu korka kuwa daqiiqado aadan rabin inay iska ilaawaan, samaynta filim guri laga yaabaa in fikrad fiican. Kuwa soo socda faqradaha walaac ku saabsan sida loo sameeyo si fudud filimada DVD taabasho la Fantashow , DVD Slideshow Builder Deluxe iyo Video Editor . Saddexdan barnaamijyada jira barnaamijyo waa filim software gaare guulaystay Abaal-marinta la kun oo dadka isticmaala daacad. Lahaanshaha waafaqsan universal la fiidiyo shiidaa digital ah ama qaab file, ay aad u tidicdo oo dhan aad sawiro iyo video jecel in DVD si fudud oo dhaqso.
Qeybta 1: Samee Home Movie la Fantashow
Qeybta 2: Samee Home Movie la DVD Muqaal dhise
Qeybta 3: Samee Home Movie la Video Editor
Fantashow waa digital software movie qaadashada kuu oggolaanaysa in aad si fudud u yaqaaniin samaynta desktop oo xiiso leh iyo mobile-friendly video duubey isticmaalaya sawiro iyo videos u gaar ah. Halkan aan aragno sida:
Tallaabada 1 Aayad iyo dooratid style movie ugu jecel yahay
Download iyo bandhigista Fantashow, markaas doortaan in ka badan 200 Hababka filim cajiib ah. Riix style aad jeceshahay iyo waxa ka codsan inuu ku soo bilowdo abuuro kuu gaar ah movie guriga.
Tallaabada 2 shakhsiyeeyo style
Si toos ah jiidi oo hoos u photos videos ama si aad u style in horay loo codsaday in guddiga sheekada. Markaasuu u baddashaan thumbnails kala duwan si ay u dar music, qoraalka iyo Intro / credits. Waa maxay ka badan, sidoo kale waxaad bedeli kartaa video style ama codsan Hababka dheeraad ah si aad filim guriga ka sii il-qabad.
Tallaabada 3 dhoofinta aad movie guriga
Haddii aad tahay qof ku qanacsan filimka abuuray, u tag "Dhoofinta ah tab 'si uu u badbaadiyo movie guriga. Waxaad si toos ah u wadaagi karaan in YouTube ama Facebook, badbaadin Qalabka telefoonada gacanta oo kala duwan iyo qaabab ama gubi in DVD.
DVD Slideshow Builder Deluxe waa gaare filim aad u fiican kaa caawinaya in aad si fudud u sameeyaan filimada sawir, videos iyo music, siinta wax soo saarka fursadaha of DVD, video, dhammaan qalabka iyo barnaamijyadooda. Download software iyo raac caaradda hoose si aad u noqon sawiro iyo videos galay a movie guriga taabashada.
Tallaabada 1 Import sawir / video files
Burcad Kan sameeyey, DVD iyo dooran hab aad ka Standard Mode iyo Advanced Mode. Halkan qaadataa Advanced Mode tusaale ahaan. Waxaa jira laba "Add Files" badhamada on interface ka, riix mid ka mid fo ku darto sawir / video files, iyo abaabulo ay jiidayeen iyo kala go'in.
Tallaabada 2 shakhsiyeeyo la kala guurka, music iyo qoraalka hoose
Tag shakhsiyeeyo tab si aad movie gaar ah. Waxaad astaysto-guurka, saamaynta, music soo jeeda, background image oo dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxaad double riixi kartaa sawirka laga keeno in lagu daro qoraalka, ama guji Voice ka badan badhanka si aad cod u gaar ah u qoraan si ay u sheegaan sheekada sawirka.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo abuuro
Hadda beddelaan si ay u abuuraan tab in ay ku eegaan aad filim ka dhigi DVD disc, ama filimada badbaadin sida faylasha kombiyuutarka. Waxaad sidoo kale si toos ah filimada gali kartaa in YouTube si aad ula wadaagto dadka kale.
Muunad movie Home abuuray DVD Slideshow Builder Deluxe
Video Editor waa tafatirka software ah u fududahay in la isticmaalo guriga video leh tafatirka gaar ah. Sidaa daraadeed, aad muuqan dhejiya karaan wada video clips, music & qoraalka, dalban saamaynta si aad u hesho filim guriga xirfad-raadinta ee daqiiqo. Waa kuwan sida:
Tallaabada 1 Import iyo darto files warbaahinta
Si aad u samayso filim guri isticmaalaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), marka hore waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan videos, sawiro iyo maqal ah si heestii dambe la isticmaalo. Ka dib markii socda software ah, doortaan 16: 9 ama 4: 3 ratio, iyo daaqad sida hoos ku arbushin ilaa doona. Riix Import in ay doortaan videos, audio iyo sawiro ka your computer.
Tallaabada 2 Edit iyo shakhsiyeeyo aad movie guriga
Video Editor Gelineya inaad si fudud shakhsiyeeyo filimka.
Tallaabada 3 Save iyo wadaagaan filimka
Ka dib markii filim guriga, riix "Abuur" button on xaq dhexe ee suuqa kala barnaamijka, waxaad heli doonaa fursado badan si ay u dhoofiyaan filimka. Tusaale ahaan, waxaad badbaadin kartaa on your computer ama geliyaan si ay u YouTube, sidoo kale waa inuu ku gubaa si DVD.
Waxaad arki waa in si sahlan loo sameeyo filimada DVD guriga la saddexda dejiyeyaasha movie DVD. Dooro mid ka mid ah sida ay baahidaada iyo la sameeyo filim hadda!
Movie Software Making u Mavericks